Ukusebenziseka: Okuqukethwe, Izindledlana, Ukuhlala kanye nokuguqulwa | Martech Zone
Ukulungiselela: Okuqukethwe, Izindledlana, Ukuwa komhlaba nokuguqulwa
NgoMsombuluko, Okthoba 7, 2013 NgoMsombuluko, Okthoba 7, 2013 Douglas Karr
Njengoba sithatha amaklayenti amasha, cishe ngaso sonke isikhathi kufanele sichaze ukuthi amathemba awathola kanjani amasayithi amaklayenti ethu, ukuthi angena kanjani kusayithi, nokuthi aguqula kanjani abe ngamakhasimende ngokusebenzisa amasu abo wokumaketha online. Akukaze yakhelwe njengoba yaklanywa. Amakhasimende ethu asebenzisa ithani lesikhathi ekhasini lawo lasekhaya, isikhathi esincane kakhulu emakhasini angaphakathi, futhi cishe asikho isikhathi kumakhasi okufika nokuguqulwa.
Iningi likholelwa ukuthi ithrafikhi esizeni sayo ibukeka kanjena:
Lokho akulona iqiniso, noma kunjalo. Ngenkathi abantu abaningi bengangena ngekhasi lasekhaya, iningi labantu elibathola ngokusesha nemithombo yezokuxhumana lingena ngamakhasi nokuthunyelwe kwebhulogi ngaphakathi kwesayithi. Ikhasi lasekhaya livikela ukuvakashelwa ikhasi elilodwa, kepha kusendleleni. Futhi, abantu bavakashela inqwaba yamadivayisi - iselula, ithebhulethi nedeskithophu.
Ngakho-ke, ukukhulisa ukubonakala kwewebhusayithi, sisebenzisa wonke amakhasi - hhayi ikhasi lasekhaya kuphela. Sincoma ukukhuphuka kokubonakala ekusesheni nakwezokuxhumana ngokunikeza izindlela eziningi ngokwengeziwe ngamasu wokuqukethwe. Okuthunyelwe ngebhulogi, amakhasi, i-infographics, amaphepha amhlophe, izifundo ezimayelana nezindaba, izindaba nemicimbi… konke lokhu kunikela ngokuqukethwe okutholakala futhi kwabelwane ngakho ku-inthanethi! Futhi siqinisekisa ukuthi zenzelwe ukuphequlula kuselula namathebulethi kanye nakideskithophu.
Okokugcina, udaba lokugcina esilubonayo ukuthi amaklayenti ethu asevele enethrafikhi enkulu efanelekile - kepha awamguquleli nje lowo mgwaqo. Ngokunikeza okunikezwayo okuningi, okunikezwayo okunamandla nokwenziwe ngokwezifiso, amademo, ukulandwa, izivivinyo, nezinye izindlela zokuguqula, sibona ukuguqulwa okuningi kwethrafikhi ekhona.
Kungani iMedium.com Ibalulekile Ngecebo Lakho Lokumaketha
I-Xtify: Izixazululo ze-Enterprise Mobile Push